Milan Waa Soo Laabatay – Lucas Biglia & Bonucci Oo Saaka Tijaabada Caafimaadka U Maraya Milan & Belotti Oo Ah Bartilmaameedka Ku Xiga – WWW.Gool24.net
Milan Waa Soo Laabatay – Lucas Biglia & Bonucci Oo Saaka Tijaabada Caafimaadka U Maraya Milan & Belotti Oo Ah Bartilmaameedka Ku Xiga
Leonardo Bonucci iyo Lucas Biglia ayaa saaka tijaabada caafimaadka u maraya kooxda AC Milan, iyadoo bartilmaameedkooda xiga uu yahay weeraryahanka Torino Andrea Belotti.
Daafaca Juventus Bonucci ayaa shalayto laga heshiiyay saxiixiisa isagoo 42 milyan yuro uga soo wareegaya Binaconeri, waxaana uu ogolaaday qandaraas shan sannadood ah.
Waxaa la sheegayaa inuu sannadkii qaadan doono 7.5 milyan yuro oo ay dheer tahay lacagaha abaalmarinada ah taasoo ka dhigeysa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu mushaharka badan Serie A.
Ka dib todobo sannadood uu joogay Juventus, daafaca dhexe ayaa si lama filaana ah ugu wareegay San Siro xilli ay soo baxayaan warar sheegaya inay isku dhaceen tababare Max Allegri iyo xiddiga Juventus Paulo Dybala.
Inkastoo Bonucci uu shalayto ku soo wareegay madxafka Milan islamarkaana baaritaanada qaar lagu sameeyay, hadana waxa uu tijaabada caafimaadka dhameystiri doonaa saaka oo Sabti ah.
Waxaa sidoo kale tijaabada caafimaadka isna maraya Lucas Biglia iyadoo labada ciyaaryahan loo balamiyay inay tijaabada caafimaadka soo xaadiraan saaka 7:30am waqtiga maxaliga ah.
Xiddiga khadka dhexe ee Lazio Biglia ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay taageerayaal faraxsan xalayto ka hor inta aan la geynin huteelka Westin Palace halkaasoo ay degaan saxiixyada cusub ee Milan.
Rossoneri waxa ay ogolaatay heshiis 17 milyan yuro ah oo ay dheer tahay 3 milyan yuro oo ku xirnaan doonta qaab ciyaareedkiisa oo ay Lazio ka siin doonto xiddiga reer Argentina.
Lacagta waalida ah ee ay Milan qarashgareneyso intaasi kuma eka, sababtoo ah waxa ay u baahan yihiin weeraryahan iyadoo Carlos Bacca la iska iibinayo islamarkaana uu Gianluca Lapadula uu tijaabada caafimaadka u mari doono Genoa.
Xiddiga xiga ee bartilmaameedka u ah waa weeraryahanka Torino Belotti kaasoo qirtay inuu taageere u yahay Rossoneri.
Sida ay sheegeen Sky Sport Italia iyo Corriere dello Sport, Milan ayaa sarre u qaadeysa wadahalada ay kula jirto Torino, iyagoo isku dayaya inay hoos u dhigaan qiimaha ay Torino duldhigtay ciyaaryahanka ee 100ka milyan yuro.
Torino waxa ay dooneysaa in la siiyo labo ciyaaryahan iyo 80 milyan yuro, halka dalabka Milan uu yahay 40 milyan yuro, waxaana jirta soo jeedin ah in dhexda la isagu imaan doono oo lagu heshiin doono 60 milyan yuro.
Torino waxa ay heli doontaa ciyaartoyda M’Baye Niang iyo Gabriele Paletta, laakiin waxaa isku mari weysan yahay lacagta kaashka ah.